Suxufi Dhalinyaro Ah Oo Loo Magacaabey Madaxa Laanta Af-Soomaaliga Ee BBC + [ Taariikhdiisa ] |
Suxufi Dhalinyaro Ah Oo Loo Magacaabey Madaxa Laanta Af-Soomaaliga Ee BBC + [ Taariikhdiisa ]
Suxufi Dhalinyaro Ah Oo Loo Magacaabey Madaxa Laanta Af-Soomaaliga Ee BBC
Suxufiga Soomaaliyeed ee Muhyadin Ahmed Roble ayaa loo magacaabay madaxa laanta Af-Soomaaliga ee BBC, kaddib markii u soo dhammaaday tartan adag oo saxafiyiin dhowr ah u galeen booskaas oo muddo dhowr bilood ah ka bannaanaa Idaacadda.
Muhyadin Roble, oo shantii sano ee la soo dhaafay madax ka ahaa Idacaada Ergo ee Qaramada Midoobay, ayaa noqonaya tifatirihii ugu da’da yaraa uguna horreeyay oo laga qaato meel ka baxsan BBC, iyadoo madaxdii ka horeysay laga soo dhex xushay shaqaalaha Idaacadda, wuxuuna sheegay inuu ku faraxsanayahay shaqada cusub ee BBC.
“Sharaf weyn ayay ii tahay inaan hoggaamiyo Laanta Soomaaliga ee BBC, taas oo ah il-wareedka ugu muhiimsan oo ay ugu kalsoonida badan yihiin Soomaalida gobolka iyo qurbaha intaba” Ayuu yidhi Muhyadin oo shaqada billaabi doona bartamaha bishan.
Suxufiyiinta Soomaaliyeed ayaa iyaguna soo dhaweeyay magacaabistiisa, waxayna sheegeen in BBC ay heshay shakhsi ku habboon. “Waa nin dhallinyaro ah oo howl kar ah oo jecel aqoonta iyo xirfadleyaasha warbaahinta , waxaana hubaa inuu ka soo bixi doono shaqadaas baaxadda leh, isbadal iyo horumarin weyn inuu ku sameyn doono BBC ayaan aaminsanahay” ayuu yidhi Ustaad C/qaadirm Maxamed Mursal oo madax ka ahaa Idacaada Ergo xilligii uu Muhyadin Roble ka mid ahaa shaqaalaheeda saxaafada Soomaaliyeedna ku jiray in ka badan afartan sano.
“BBC Somali waxay heshay tifaftiraha aad wanaagsan. Muddo 13 sanadood ah ayaan nahay saaxiibbo isku dhow, sanado badanna shaqo wadaag ayaan aheyn, waxaan ogahay halganka uu u galay inuu qof ahaan iyo xirfad ahaan is horumariyo, aqoontiisa inuu dhiso, mihnadda aan wadaagno ee warbaahinta uu wax weyn ku soo kordhiyo” Ayuu Abdirahman Taysiir isna ku soo qoray bartiisa Facebook.
Muhyadin sidoo kale waa tababare saxaafadeed, cilmibaare iyo falanqeeye siyaasadeed oo la shaqeeyay Machadka Rift Valley Institute iyo Hay’adda Jamestown Foundation. Waa falanqeeye kasoo muuqday shaashadaha Caalamiga ah sida AlJazeera, CBC, France 24, VOA, iyo kuwa kale.
Wuxuu ka qalinjebiyay Jaamacadda Mareykanka ee United States International University (USIU) oo ka qaatay shahaadada masters ka oo ah Xidhiidhka caalamiga, siyaasada arrimaha dibeda, iyo diblumaasiyada. Isla Jaamacaddaas ayuu ka heystaa Bachelor’s degree oo saxaafada ah.